Health Tips « Ramkeshar’s World
गर्भावश्थामा अनुहारमा चायाँ आउनु एक प्रमुख समस्या रहेको छ चायाँ आउनको मुख्य कारणहरु भनेको रगत फोहर हुनु, ग्यास्टिक, छाला अधिक मात्रामा सुख्खा हुनु, छाला चिल्लो हुनु र घाममा धेरै हिंड्नु आदी हुन् गर्भावश्थामा चायाँ आउनुलाई सामान्य मानेता पनि नौ महिना सम्म बोकेर हिंड्न अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसैले यस्ता चायाँलाई हटाउन हामीले घरेलु औषधी प्रयोग गर्न सक्दछौं यस्का लागि हामीले आफ्नो छाला को प्रकार बुझ्नु पर्दछ हाम्रो छाला चार प्रकारको हुन्छ
१) सुख्खा छाला
२) चिल्लो छाला
३) दुबै मिसिएको छाला र
४) सामान्य छाला
१) सुख्खा छालाको लागि प्याक बनाउन चाहिने सामाग्रीहरु निम्न प्रकार छन – आधा चम्चा चिनी – दुई ठूलो चम्चा पानी – अण्डाको पहेंलो भाग – आधा चम्चा कागतीको रस
लगाउने तरिका चिनी र पानी तताएर एक आपसमा मिसाउने र मिसिए पछी अण्डाको पहेंलो भाग फेट्ने त्यसमा कागती पानी राखेर फेरी फेट्ने र २० मिनेट सम्म अनुहारमा लगाउने र सफा पानीले मुख धुने त्यस पछी भिटामिन ‘ ई ‘ भएको क्रिम लगाउने
२) चिल्लो छालको लागि प्याक बनाउन चाहिने सामाग्री – पातलो कपडा – आलुको भित्री भाग – तातो पानी- कपास
लगाउने तरिका :पहिले अनुहारमा बाफ लिने र कपासले सफा संग अनुहार पुछ्ने त्यसपछी आलुलाई पातलो कपडामा राखेर चायाँ भएको ठाउमा १० देखी १५ मिनेट सम्म सर्कल मसाज गर्ने
३) दुवै मिसिएको छालाको (चिल्लो तथा सुख्खा) लागि माथिकै सामाग्री प्रयोग गर्ने यदी तपाईंको छाला सुख्खा र चिल्लो दुवै खाले छ भने जहाँ चिल्लो छ त्यहा चिल्लो को फेस प्याक लगाउने र जहाँ सुख्खा छ त्यहा सुख्खाको फेस प्याक लगाउने
४) सामान्य छालाको लागि चाहिने सामाग्री :अण्डाको सेतो भागमा दुई चम्चा सख्खर राखेर फिट्ने र बदामको तेल दुई वा तीन थोपा हाल्ने त्यसपछी त्यो प्याक लाई अनुहारमा लगाएर सफा पानीले धुने अनुहार पखाली सके पछी मोइस्चराइजर क्रिम लगाउने तसर्थ घरमा नैं उपलब्ध सामाग्री प्रयोग गरेर हामीले गर्भावस्थामा आउने अनुहारको चायाँ बाट बन्चित हुन सक्छौं
April 21, 2010 Posted by ramkeshar | Health Tips	| Leaveacomment
Something About Erection
June 12, 2009 Posted by ramkeshar | Health Tips	| Leaveacomment
हृदयघात भएर मृत्यु भएको खबर सुन्दा शरीर नै जिरि· गर्छ । त्यसैले कस्ता रोग वा लक्षण भएका व्यक्तिलाई हृदयघात हुन सक्छ ?
आजको एक्काइसौं शताब्दीको नम्बर एक मृत्युको कारण हृदयघात नै छ । तर्सथ हृदयघात बढी हुने सम्भावना भएका भन्नाले चिनीरोग भएका, उच्च रक्तचाप भएका, धूमपान गर्ने, अल्छी, उच्च तौल भएका तर उपचार नगरेका तथा नकारात्मक सोच, रिस, घमण्ड धेरै भएकाहरु पर्दछन् । यस्ता समस्याहरु जुन परिवर्तनीय कारक तत्त्व भनेर बुझिन्छ, नियन्त्रण गर्न सकेमा त्यो सम्भावना घटेर जान्छ । लक्षणको कुरा गर्दा देब्रेपट्टकिो छातीमा पीडा र अति गहिरो तथा कडा दुखाइ हुन्छ, त्यो दुखाइ देब्रे कुम, देब्रे ब·ारा, देब्रे हात र देब्रे हातको औंलासम्म र्सन सक्छ । आजको विषम जीवनशैली तथा तनावपूर्ण जीवनमा हृदयघातको भागिदार जो पनि हुन सक्छ ।
May 22, 2009 Posted by ramkeshar | Health Tips	| Leaveacomment
शारीरिक व्यायाम गर्नेहरुले सेटअप, ह्याबिङ मात्र नगरी कटअप निकाल्न जिमखाना जाने गरेको पाइन्छ । व्यायाममा योग पनि पर्न आउने हुँदा म १९ वषर्ीय युवकले कस्तो व्यायाम गर्नु उपयुक्त होला ?
यो उमेरले योचाहिँ कसरत गर्ने, योचाहिँ नगर्ने भन्नुभन्दा पनि आफ्नो शारीरिक शक्ति र आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै व्यायाम गरे पनि हुन्छ । कमसेकम दिनमा आधादेखि एक घण्टासम्म पसिना आउने गरी नियमित व्यायाम गर्नु राम्रो हुन्छ । जसमा खेल्ने, दौडने, पौडिने जे गरे पनि हुन्छ । त्यो नै उत्तम हुन्छ । यसका अलावा योग र ध्यान थपेमा स्व्ाास्थ्यमा थप फाइदा हुने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।
स्वस्थताका लागि कागती
कागती उपचारमूलक प्रकृतिको भएकाले धेरै समयअघिदेखि विभिन्न प्रयोजनका लागि मानिसले यसको उपभोग गर्दै आएको पाइन्छ । कागतीको मूल उत्पादनस्थल यकिन नभए पनि भारत, उत्तरी बर्मा र चीनबाट यसको विस्तार भएको अनुमान छ । कागती थुप्रै रोगहरुको घरेलु उपचारको निम्ति प्रयोग गरिन्छ । कागतीमा पेट सफा गर्ने विशेष तत्त्व रहेकोले पेटको समस्या पर्दा प्रायजसो व्यक्तिले यसको सेवन गर्ने गरेको पाइन्छ ।
कागतीमा रोगप्रतिरोधात्मक प्रणालीलाई मजबुत पार्ने क्षमता हुन्छ । यसको जुस पिउनाले रुघा-खोकी लागेको समय शरीरलाई आराम मिल्छ । साथै अन्य संक्रमण हुनबाट यसले शरीरलाई बचाउँछ । यसमा ब्याक्टेरिया एवम् भाइरसविरुद्ध लड्ने क्षमता पनि हुन्छ । दिनहुँ तातो पानीसँग कागती सेवन गरेमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट शरीरलाई लाभदायक हुन्छ ।
कागतीको रसले रगत सफा गर्न र शरीरबाट विषाक्त पदार्थ निष्कासन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । कुनै पनि संक्रमणबाट हुने रोगहरुसँग लड्ने क्षमता कागतीमा हुन्छ ।
यिसमा अधिक मात्रामा पोटासियम हुने भएकोले मुटुसम्बन्धी समस्या भएकाहरुले यसको जुस पिउनु फाइदाजनक हुन्छ । एक चम्चा कागतीको रस आधा गिलास पानीमा मिलाई पिउनाले सामान्य मुटु पोल्नेमा पनि राहत मिल्छ । कागतीमा पोटासियम पाइने हुनाले यसले मस्तिष्क र नसाका कोषहरुलाई पोषण दिने काम गर्छ ।
कागतीको रसबाट कलेजोले जति पाचन रस (Engymes) निर्माण गर्न सक्छ, अन्य खानाबाट त्यति पाचन रसको निर्माण सम्भव छैन । त्यसैले कलेजोको समस्या हुनेहरुले कागतीको सेवनबाट निकै फाइदा लिन सक्छन् । कलेजो खराब भएको खण्डमा हरेक बिहान खाना खानु एक घण्टाअघि तातो पानीमा कागतीको रस मिसाएर खाने गरेमा फाइदा हुन्छ ।
यिसमा क्याल्सियम भएकोले हड्डी बन्न मद्दत पुग्नुका साथै दाँत स्वस्थ राख्छ ।
किागतीमा क्याल्सियमसँग मिली घोलक तत्त्व बनाउने क्षमता भएकाले मिर्गौलाको पत्थरी भएको खण्डमा समेत यसको सेवन लाभदायक हुन्छ । मिर्गौलामा भएको पत्थरलाई पगाल्न सक्ने घोलक तत्त्व कागतीले निर्माण गर्न सक्छ । प्रायः क्याल्सियम अन्य तत्त्वसँग मिली कडा भएको खण्डमा मिर्गौलाको पत्थरी हुने गर्छ । यसकारण नियमित कागतीको उपभोगले यस्ता समस्याबाट जोगिन सकिन्छ ।
कागतीको रस जैतुनको तेल ( Olive Oil) मा मिलाई पिउनाले केही हदसम्म पित्तको पत्थर पगाल्न मद्दत पुग्छ ।
कागती प्रकृतिले दिएको आफैंमा एउटा प्रतिरक्षात्मक वस्तु हो । यसैले काटिएका सानातिना घाउमा कागती दल्ने चलन छ । घाउबाट रगत बगेमा कागतीको रस लगाएर पनि रगत थाम्ने गरिन्छ ।
घाँटी दुखेको समय पानीमा कागतीको रस केही थोपा राखी कुल्ला ९न्बचनभि० गर्नाले घाँटीलाई सन्चो हुन्छ ।
मिहिनावारीको समयमा अधिक रगत बगेमा एउटा कागतीको रस चिसो पानीमा मिलाएर सेवन गर्नुपर्छ । दिनको ३-४ पटकसम्म यसरी सेवन गर्नाले रगत बढी जाने समस्या नियन्त्रण हुन्छ ।
सकर्भी (Scurvy) लागेको खण्डमा कागती र पानी मिलाएको जुस दुइ आउन्सका दरले ४-४ घण्टाको फरकमा पिउनाले यो समस्या बिस्तारै हराएर जान्छ ।
कागतीले मेटाबोलिजम (Metabolism) लाई
पनि फाइदा पुर्‍याउँछ । मेटाबोलिजम रेट राम्रो भएमा क्यालोरी अर्न्तर्दहन हुन मद्दत पुग्छ, जसले गर्दा मोटोपनको नियन्त्रणमा फाइदा पुग्छ ।
केही अध्ययनले देखाएअनुसार कागतीको तेलको बास्नाले शारीरिक थकान मेट्ने र उदासीपन, चिडचिडाहटलाई समेत नियन्त्रणमा राख्ने गर्छ ।
किागतीको सेवनले मधुमेह हुन नदिन पनि केही मात्रामा मद्दत गर्छ ।
सौर्न्दर्यका निम्ति लाभदायी
– काटेको कागतीलाई मुखमा दल्ने र दुइ घण्टासम्म सुक्न दिएपछि मुख धुनाले अनुहारको चाउरीपन र काला धब्बाहरु हट्न सक्छ । मुख धोएपछि हल्का जैतुनको तेल (Olive Oil) मुखमा दलेमा अझ राम्रो हुन्छ । कागतीले नयाँ छाला बनाउने प्रविधिमा तीव्रता ल्याउँछ । अनुहारमा कागती दलेपछि घाममा भने बस्नुहुँदैन । यसरी घाममा बस्दा छाला खुइलिन सक्छ ।
– कागतीले कपालको निम्ति राम्रो पोषण (Tonic) दिने काम गर्छ । कपाल धेरै तैलीय भएमा कागतीको रस राखेर मसाज गर्नाले तेल बनाउने ग्रन्थिलाई नियन्त्रणमा राखी कपाल स्वस्थ रहन मद्दत मिल्छ । कपालमा कागती दल्ने गरेमा यसबाट कपाल चाया (Dandruff) रहित भई चम्किलो पनि हुन्छ ।
– कागती प्राकृतिक रुपमा गन्धनाशक वस्तु पनि हो । यसलाई दर्ुगन्धनाशक वस्तुको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । शरीर गन्हाउने छ भने कागतीको रस दल्नाले केही समय गन्धहीन रहन सकिन्छ ।
– बैंक वा अन्य वित्तीय कारोबार हुने ठाउँमा आधी काटेको कागतीमा औंला भिजाउँदै रकम गन्ने गरेमा सजिलो हुन्छ । यसले म्वाइस्चराइजरको काम गर्छ ।
– माछालाई म्यारिनेट -केही समय मोलेर राख्ने) गर्ने समयमा कागतीको रस प्रयोग गर्नाले माछाको गन्धलाई निराकरण गर्छ ।
– मासु पकाउनु केही समयअघि मासुमा अन्य सामग्रीका साथ कागतीको रस केही बेर म्यारिनेट गर्नाले मासु नरम बनाउँछ । यसले गर्दा मासु चपाउन र पचाउन सरल हुन्छ ।
– काटेको केही समयमै कालो हुने केरा, स्याउ, एभोकाडोजस्ता फलफूल काटेपछि माथिबाट कागतीको रस छरिदिनाले ती फलफूल केही समयसम्म कालो हुन पाउँदैनन् ।
– कागतीको बोक्रालाई धूलो बनाई विभिन्न खानामा स्वादको निम्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
– काटेको कागती पकाएको खाना र पेयपदार्थमा सजावट एवम् स्वादको निम्ति प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
– कागतीको अचार, तितौरा बनाएर पनि सेवन गर्न सकिन्छ ।
सरसफाइ र कीटाणु नष्ट गर्न उपयोगी
– कागतीको रसले भान्सा सफा गर्दा त्यहाँको फोहोर र चिल्लो दागहरु सजिलै हटाउन सकिन्छ ।
– कागतीको रसमा बेकिङ सोडा मिसाएर प्लास्टिक तथा तामाका भाँडा सफा गर्न र टल्काउन सकिन्छ ।
– कागतीको रसले भाँडावर्तन वा कुनै पनि वस्तु सफा गर्नाले कीटाणु नष्ट हुन्छन् । साथै यसले सुगन्धित पनि बनाउँछ ।
– कागती कीराविरुद्ध प्रयोग गरिने प्रकृतिले दिएको कीटनाशक वस्तु पनि हो, जसले लामखुट्टे र झिँगा भगाउन मद्दत गर्छ ।
– बारुला तथा मौरीको टोकाइमा कागतीको रस दल्नाले दुखाइ कम हुन्छ ।
– दमका रोगीहरुका निम्ति पनि कागती फाइदाजनक छ ।
– दाँत दुखेको र कीराले खाएको अवस्थामा दाँतमा कागतीको रस राख्नाले दुखाइ कम हुन्छ ।
कागतीमा पाइने पोषक तत्त्वहरु
भिटामिन ँबी’, थायमिन, राइबोफ्लाबिन, भिटामिन ँसी’, क्याल्सियम, फोस्फोरस, कार्बोहाइड्रेड, प्रोटिन,क्यालोरी, पोटासियम, म्याग्नेसियम आदि ।
May 22, 2009 Posted by ramkeshar | Health, Health Tips	| Leaveacomment
जाडोको सहवास हितकारक
जाडो याममा तेलले मालिस गर्नु, घाम ताप्नु, पान खानु, सिरक अर्थात् ओढ्ने ओढनु, तातो खानेकुरा भोजन गर्नु, तातो पानीको प्रयोग गर्नु र नारीका साथ रहनु सात चीज हितकर हुने कुरा आयुर्वेदमा बताइएको छ। भनिएको छ-
तैलातप ताम्बुलं तूलिका तप्त भोजनम्।
तप्तोदकं तरुणनारी शीते सप्त सुखावहाः।
जाडोमा घाम प्यारो हुन्छ। त्यसैले घाम ताप्दा शरीरमा जीवनशक्ति बढ्छ। यसबाट अन्य शारीरिक लाभ पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस्तै तेल मालिस गर्नु कपाल, छालाका लागि लाभदायक हुन्छ। यसले छाला मुलायम बनाई सर्दी घुस्नबाट बचाउनुका साथै खस्रो र फुट्नबाट रोक्ने काम गर्छ। मालिस र व्यायाम गर्नाले रक्तसञ्चालन राम्रोसँग हुन पाउँछ।
जाडोमा तातो पानीले नुहाउने गर्नुपर्छ। मनतातो पानी पिउँदा सर्दी लाग्न पाउँदैन। त्यस्तै तातो घरमा बस्नु, तातो खानेकुरा खानु, तातो ऊनी लुगा लगाउनु पनि जाडोबाट बच्ने उपाय हुन्। हेमन्त ऋतु अर्थात् मंसिर-पुसमा इच्छाअनुसार स्त्री-पुरुष सहवास गर्नु पनि हितकारक हुने कुरा आयुर्वेदमा उल्लेख गरिएको छ। जाडोमा वातवर्द्धक र थोरै खाना खानु, दिउँसो सुत्नु, परिश्रम नगर्नु, अति जाडो सहन खोज्नु, धेरै बेर भोकै रहनु आदि अपाच्य मानिन्छ। त्यसैले यसबाट बच्नुपर्छ। यी विधिको नियमपूर्वक पालन गरेमा जाडोयाम अर्थात् शीत ऋतुमा स्वस्थता प्राप्त गर्न सकिन्छ। बलवृद्धिका साथै रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ। त्यसैले ऋतुचर्याको पालन गर्नु अत्यन्त उपयोगी मानिन्छ।
May 18, 2009 Posted by ramkeshar | Health, Health Tips	| Leaveacomment
यौनरोगः लाज मानेर निको हुँदैन
स्वास्थ्य परीक्षण गर्न वीर अस्पतालको छाला, यौन तथा कुष्ठरोग विभागमा डाक्टरलाई भेटेको केही क्षणमै बिरामी हतास मनस्थितिमा पुगे। घाउहरु देखाएर लक्षण उल्लेख गर्दा सम्बन्धित डाक्टरले यौनरोग लागेको बताएपछि थचक्क कुर्सीमा बस्दै हतास मुद्रामा ती अधबैंसे बिरामीले सोधे- ँडाक्टर सा’ब, यो रोग निको हुँदैन त ?’ काठमाडौंमा विस्थापित जीवन बिताइरहेको बताउने ३८ वर्षीय ती अधबैंसे नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै भन्छन्- ँएकैछिन्को असावधानीले सारा सपना ध्वस्त भए।’ घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै अन्यत्र गएर असुरक्षित यौनसम्पर्क गर्दा उनको शरीरमा हर्पिस सिम्प्लेक्स भाइरस टु नामक जीवाणु प्रवेश गरेको छ। करिब १२ वर्षअघि असुरक्षितरुपमा यौनसम्पर्क गरेको र त्यसको एक सातापछि नै पिसाब पोल्न थालेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्- ँपानीको फोकाजस्ता स-साना घाउहरु आउन थाल्दा नै शंका त लाग्याथ्यो, तर केही समयपछि आफैं ठीक भएकोले त्यति वास्ता गरिएन।’
यौनांगको वरिपरि स-साना पानीफोकाजस्ता घाउहरु फुट्ने र चहर्‍याउँदाखेरि उनले औषधि पसलबाट किनेर मलहम लगाए तर जँचाएनन्। यसबारेमा उनी भन्छन्- ँएक त आफैंलाई लाज लाग्यो, फेरि कसैले देख्ने वा थाहा पाउने हुन् कि भन्ने डर पनि भयो।’
सम्बन्धित विशेषज्ञहरुका अनुसार उनलाई हर्पिस जेनिट्यालिस (Herpes Genitalis) नामक यौनरोगले सताइरहेको छ। यो रोग निको पार्ने औषधि हालसम्म बनेको छैन। वरिष्ठ चर्म तथा यौनरोग विशेषज्ञ डा. अनिलकुमार झा भन्नुहुन्छ- ँजतिसुकै औषधि गरे पनि यो पानीफोका यौनांगवरिपरि पटक-पटक आउँछ। विनाऔषधि फोका हराएर पनि जान सक्छ। तर केही समयपछि पुनः आइहाल्छ। यो यौनरोगले असाध्यै दुःख दिन्छ।’
यौन सङ्क्रमण भएको व्यक्तिसँगको असुरक्षित यौनसम्पर्कबाट सर्ने हर्पिस जेनिट्यालिस लगायतका दर्जनौं यौनरोगहरु महिला र पुरुष दुवैमा सङ्क्रमण हुने क्रम बढ्दो छ। जसमध्ये अधिकांश यौनरोगहरुको समयमै उपचार गरे पूर्णरुपले निको हुने सम्बन्धित चिकित्सकहरु बताउँछन्।
बढ्दै छ जोखिम
नेपाल मात्र नभएर विश्वमै जनस्वास्थ्यको प्रमुख समस्याका रुपमा यौनरोगहरु देखापरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको एक प्रतिवेदनअनुसार विश्वमा प्रत्येक वर्ष३५ करोडभन्दा बढी व्यक्तिलाई नयाँ यौनरोगको सङ्क्रमण हुने गरेको छ। जुन सङ्क्रमण नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरुमा बढी हुने गरेको पाइएको छ। संगठनले गरेको अनुमानमा यौनरोगहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ट्राइकोमोनियासिस (Trichomoniasis) बाट १९ करोड ३० लाख, क्लामाइडिया (Chlamydia) बाट ९ करोड ३० लाख, गोनोरिया (Gonorrhoea) बाट ६ करोड २० लाख र सिफिलिस (Syphilis) बाट १ करोड २० लाख मानिसहरु सङ्क्रमणमा पर्ने गरेका छन्। यी रोगहरु औषधि गर्दा पूर्ण निको हुन्छन्। हरेक १० जना यौनरोगीमध्ये ७ जना यौनरोगीहरु १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा पर्छन्।
असुरक्षित यौनसम्बन्धका कारण बढ्दै गएको यौनरोगबाट नेपालमा कति पीडित छन् भन्नेबारे आधिकारिक तथ्यांक छैन। बेलाबखत गरिएका अध्ययन-अनुसन्धानहरुमा पनि एकरुपता छैन। सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् १९९८-९९ मा शून्य दशमलव ३४ (०.३४) प्रतिशतमा यौनरोग पाइएको थियो। यौनरोगीहरुलाई परामर्श र उपचार गर्दै आइरहेको स्याक्ट्स नामक संस्थाले सन् १९९९ मै काठमाडौंका ३ सय जना व्यावसायिक यौनकर्मीमा गरेको एक अध्ययनमा १९ दशमलव ३ प्रतिशतमा सिफलिस नामक यौनरोग लागेको पाइएको थियो। १७ दशमलव ३ प्रतिशतमा एचआईभी सङ्क्रमण भएको उल्लेख छ।
एकभन्दा बढी व्यक्तिसँग असुरक्षित यौनसम्पर्क राख्नेहरु नै यौनरोगको सङ्क्रमणमा पर्ने गरेको स्याक्ट्सकी कार्यक्रम संयोजक पूर्णदेवी मानन्धर बताउनुहुन्छ। सन् २००० मा स्याक्ट्सले यौनकर्मी र हाई-वेमा ट्रक चलाउने ड्राइभरहरुबीच गरेको सर्वेक्षणमा यौनकर्मीमध्ये ४ प्रतिशतमा एचआईभी र १ दशमलव ५ प्रतिशत ड्राइभरहरुमा पनि एचआईभी पाइएको थियो। त्यस्तै बसाइँ सराइ गरेका वा विस्थापित परिवारमा पनि यौनरोग देखापरेको छ।
कैलाली जिल्लाको धनगढीमा बसाइँ सराइ गरेका तथा त्यहीँ बस्दै आएका पुरुषहरुबीचको सर्वेक्षणमा शून्य दशमलव ३ प्रतिशतलाई एचआईभी भएको देखिएको छ। सन् २००२ मा गरिएको यस सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये शून्य दशमलव ५ प्रतिशतमा सिफलिस पाइएको थियो। त्यस्तै पोखरामा पनि एचआईभी, सिफलिस, जीएनआईडीजस्ता यौनरोगबाट प्रभावित हुनेहरुको संख्या बढ्दो छ। सन् २००३ मा पोखरामा ३ सय जना दुर्व्यसनीहरुभध्ये २२ प्रतिशतमा एचआईभी, ८ प्रतिशतमा सिफलिस र १२ प्रतिशतमा जीएनआईडी पाइएको थियो। त्यस्तै सन् २००४ मा काठमाडौंका यौनकर्मीहरुबीचको सर्वेक्षणमा २ प्रतिशतमा एचआईभी र ३४ प्रतिशतमा सिफलिस देखा परेको तथ्यले पनि यौनरोगको भयावहलाई देखाउँछ।
स्वच्छन्द यौन क्रियाकलापले यौनरोग फैलाउन बढावा दिएको छ। युनिसेफले नेपालका टिनएजर्सहरुबीच सन् २००१ मा गरेको एक अध्ययनमा २० प्रतिशत किशोरकिशोरीहरुले विवाहपूर्वको यौनसम्पर्कलाई ठीक भएको बताएका छन्। ५ जना केटाहरुमा १ जना र १० जना केटीहरुमा १ जनाले यौनसम्बन्ध राखेको पाइएको छ। यौनसम्बन्ध असुरक्षित किसिमबाट समेत हुने गरेको छ। असुरक्षित यौनसम्पर्कबाट १४ प्रतिशत किशोरीहरु गर्भवती भएको र १३ प्रतिशत यौनरोगी भएको पाइएको छ। त्यस्तै यौनसम्पर्कबाटै २२ प्रतिशत केटाहरुमा यौनरोग सरेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. पदमबहादुर चन्दका अनुसार भारतमा काम गर्न गएका कतिपय पुरुष एवम् महिला एचआईभीलगायतका यौनरोगहरुबाट पीडित भई घर फर्कने गरेका छन्। डा. चन्द भन्नुहुन्छ- ँघरमा आएपछि असुरक्षित यौनसम्पर्क गरेर रोगलाई सार्ने काम भइरहेको छ।’ भारतमा २० लाख यौन व्यवसायी छन्। जसमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशत किशोरीहरु भएको अनुमान गरिएको छ। जहाँ नेपाली पुरुषहरु पनि जाने गरेका छन्। हरेक वर्ष ५ देखि १० हजार नेपाली महिलाहरु भारतको यौनबजारमा बेचिने गरेका छन्। मुर्म्बईबाट नेपाल आएका नेपाली महिला यौन व्यवसायीमध्ये ५० प्रतिशतमा एचआईभीलगायत अन्य यौनरोगको सङ्क्रमण दखा परेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ।
चेतनाको अभाव, सामाजिक हेयको भावना, संकुचित मानसिकताका कारण कतिपय यौनरोगीहरु जँचाउनसमेत जाँदैनन्। यस कार्यले पनि यौनरोग झन्-झन् भयावह बन्दै गएको विज्ञहरु बताउँछन्।
मुख्यतः असुरक्षित यौनसम्पर्कबाट यौनरोग सर्ने भए पनि कतिपय अन्य कारणबाट पनि सङ्क्रमणमा परेका छन्। वरिष्ठ चर्म तथा यौनरोग विशेषज्ञ डा. अनिलकुमार झाका अनुसार सङ्क्रमित गर्भवती आमाबाट जन्मेको शिशु, निर्मलीकरण नगरिएको सुई तथा औजार, सङ्क्रमित रगत र रगतजन्य पदार्थहरुबाट पनि यौनरोग सर्न सक्छ।
नेपालमा विशेषगरी एचआईभी/एड्स सिफिलिस (भिरंगी), गोनोरिया (धातुरोग), हर्पिस जेनिट्यालिस, स्याङ्क्रवाइड, क्लामाइडिया, ट्राइकोमोनियासिस, भेनेरल वार्ट, ग्रानुलोमा इनग्विनेल लगायतका यौनरोग देखा परेका छन्। असुरक्षित यौनसम्पर्क गरेको ९ देखि ९० दिनभित्र यौना·मा सानो खटिरा आयो भने सिफिलिसको शंका गर्दा हुन्छ। डा. झा भन्नुहुन्छ- ँयो खटिरा केही समयपछि आफैं हराएर जान सक्छ तर कीटाणु भने रगतमा प्रवेश गरी भित्री शारीरिक अंगलाई असर गर्छ। रोग जटिल अवस्थामा पुग्यो भने शरीरको सम्पूर्ण अंगलाई क्षति पुर्‍याउँछ।’ घाउ नभए पनि कसै-कसैलाई रगतमा एकै पटक कीटाणु देखिन सक्छ। यो आमाबाट बच्चामा पनि सर्न सक्छ।
त्यस्तै असुरक्षित यौनसम्पर्क गरेको १० दिनभित्र यौना·बाट पीपजस्तो पदार्थ आउन थाल्यो भने गोनोरिया -धातुरोग) भएको हुन सक्छ। पिसाब फेरिरहन मन लाग्ने तर पोल्ने महसुस गर्नुभएको छ भने जँचाइहाल्नुस्, तत्कालै जाँच र उपचार गरे गोनोरिया निको हुने चिकित्सकहरु बताउँछन्। यौनसम्पर्क गरेको ७ देखि १० दिनभित्रै एकभन्दा बढी पिलोजस्ता खटिरा एकैचोटि आएको छ भने स्याङ्क्रवाइडले सङ्क्रमण गरेको हुन सक्छ। डा. झाका अनुसार सिफलिसमा पिलो दुख्दैन तर स्याङ्क्रवाइडयुक्त पिलो दुख्छ। समयमै उपचार गरे यो रोग पनि निको हुन्छ।
जतिसुकै औषधि गरे पनि निको नहुने हर्पिस जेनिट्यालिस भएको छ भने यौनांगको वरिपरि मसिना पानीफोकाहरु आउँछन्। विनाऔषधि फोकाहरु हराएर पनि जान सक्छन्। र, पुनः फोकाहरु आएर दुःख दिन्छन्। यसको कीटाणु रगतमा लुकेर बसेको हुन्छ। यो रोग लागेको महिला वा पुरुषसँग असुरक्षित यौनसम्पर्क गर्दा सजिलै रोग सर्ने डा. झा बताउनुहुन्छ।
महिलाहरुमा बढी हुने ट्राइकोमोनियासिस यौनसम्पर्क मात्र नभई यौनांग फोहोर भएर पनि हुन सक्छ। यो रोग लागेको बेला यौनांगबाट सेतो पानी आउने, यौनांगवरिपरि रातो बिमिरा आउने, यौनांग सुन्निने हुन्छ। त्यस्तै क्यान्डिडियासिस नामक रोग पनि असुरक्षित यौनसम्पर्क र फोहोरमैलाका कारण हुन्छ। यौनांग रातो हुने, यौनांगवरिपरि रातो बिमिराजस्ता लक्षणहरु देखा पर्छन्। डा. झा थप्नुहुन्छ- ँकीटाणु यौनांगमा छ भने एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग गर्दा यो रोग झन् बढ्न सक्छ।’
भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र तथा तराईका बासिन्दामा बढी पाइने रोग ग्रानुलोमा इनग्विनेल भएको बेला यौनांगमा खटिरा आउने र सुन्निने हुन्छ।
यौनरोग सङ्क्रमितसँगको असुरक्षित यौनसम्पर्क वा अन्य कारणले रोग सरेका व्यक्तिहरुमा हीनताबोध र डरसँगै लाजले गर्दा जँचाउन जाने गरेको पाइँदैन।
यौनरोगीहरुलाई स्वेच्छिक परामर्श दिंदै आउनुभएकी पूर्णादेवी मानन्धर सामाजिकरुपमा हेय भावनाले हेरिने परम्पराले गर्दा उपचार गर्न हिचकिचाउने गरेको बताउनुहुन्छ। त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा चर्म तथा यौनरोग विभागका प्रमुखसमेत रहिसक्नुभएका वरिष्ठ चर्म तथा यौनरोग विशेषज्ञ डा. अनिलकुमार झा पनि यौनरोगको शंका लाग्यो भने धेरै बिरामीहरु सरकारी अस्पतालमा भन्दा निजी अस्पतालमा जाने गरेको बताउनुहुन्छ। सरकारी अस्पतालमा जाने चर्मरोगीमध्ये १ देखि २ प्रतिशत मात्र यौनरोगी हुने गरेका छन्। तर निजी नर्सिङहोममा सम्पूर्ण चर्मरोगीमध्ये ३ देखि ४ प्रतिशत यौनरोगी रहने गरेको डा. झा उल्लेख गर्नुहुन्छ। उहाँका अनुसार सरकारी अस्पतालमा कसैले देखिहाल्ने पो हुन् कि भन्ने त्रास हुन्छ, त्यसैले धेरै बिरामीहरु गोपनियता खोज्दै निजी नर्सिङहोमतिर नै जान्छन्।
स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीबीचको सुमधुर अन्तरक्रिया नै यौनरोगको उपचार सेवा र परामर्शका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यौनरोग सेवा प्रदान गर्ने क्रममा अरुले संवाद नसुन्ने तथा परीक्षण गर्दा नदेख्ने गरी गोप्य हुनुपर्छ। तर सरकारी अस्पतालहरुमा यौनरोग सेवा दिने स्थल र विधिप्रति बिरामीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। वीर अस्पतालमा जँचाउन गएका एक बिरामीले दुखेसो पोख्दै भने- ँएक त हामी आफैंमा पनि हीनताबोध भइरहेको हुन्छ। त्यसमाथि डाक्टरहरुको व्यवहारले झन् पीडा थप्छ।’
यौनरोगको सही निदान र अधिकांश यौनरोगको प्रभावकारी उपचार हुन्छ। तर सही ज्ञान पनि नहुँदा कतिपयले यौनरोग पालेर बसेका छन्। यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारे अभिभावकहरुलाई नै पर्याप्त जानकारी नभएको र यी विषयमा खुलेर कुराकानी गर्ने वातावरण अझै बनिसकेको छैन। सरकारी क्षेत्रबाट पनि पर्याप्त जनचेतना तथा उपचारका कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
सन् १९९५ मा सम्पन्न चौथो अन्तर्राष्ट्रिय महिला भेलाले किशोर-किशोरीहरुलाई यौन था प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना सेवा प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी र त्यसको संवर्द्धन गर्ने प्रस्तावमा नेपालले सहमति जनाएको थियो। त्यस्तै दशौं योजना (२०५९-०६४) मा किशोर-किशोरीहरुलाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी स्वास्थ्य शिक्षा र परामर्श सेवा दिने कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ भनी उल्लेख छ। सन् १९९८ मा तयार गरिएको राष्ट्रिय प्रजनन स्वास्थ्य रणनीतिका आधारमा किशोर-किशोरीहरुको स्वास्थ्य र विकाससम्बन्धी रणनीति पनि बनेको छ। तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपालमा कुल एचआईभी पोजेटिभ लगायतका यौनरोगमध्ये ९० प्रतिशतलाई असुरक्षित यौनसम्पर्कबाट भएको छ। जसमध्ये १५ प्रतिशतभन्दा बढी किशोर-किशोरीहरु रहेका छन्।
यौनरोगबारे स्वास्थ्य शिक्षा, परामर्श, सहज उपचार व्यवस्था बेलैमा गर्ने हो भने यौनरोग फैलनबाट रोक्न सकिन्छ। यसका साथै स्वयम् बिरामी पनि नलजाई समयमै जँचाएर उपचार गर्नतिर लाग्दा निको हुन सक्छ। अधिकांश यौनरोग बेलैमा उपचार गरे निको हुन्छ। उपचारमा ढिलाइ गरे बाँझोपन, गर्भपतन, शिशुमा अन्धोपन, पाठेघरबाहिर गर्भ रहने, पाठेघरको मुखको क्यान्सर र मृत्युसमेत हुन सक्ने चिकित्सकहरु बताउँछन्।
May 16, 2009 Posted by ramkeshar | Health, Health Tips	| Leaveacomment
गर्भावश्थामा अनुहारमा चायाँ आउनु एक प्रमुख समस्या रहेको छ चायाँ आउनको मुख्य कारणहरु भनेको रगत फोहर हुनु, ग्यास्टिक, छाला अधिक मात्रामा सुख्खा हुनु, छाला चिल्लो हुनु र घाममा धेरै हिंड्नु आदी हुन् गर्भावश्थामा चायाँ आउनुलाई सामान्य मानेता पनि नौ महिना सम्म बोकेर हिंड्न अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसैले यस्ता चायाँलाई हटाउन हामीले घरेलु औषधी प्रयोग गर्न सक्दछौं यस्का लागि हामीले आफ्नो छाला को प्रकार बुझ्नु पर्दछहाम्रो छाला चार प्रकारको हुन्छ
१) सुख्खा छालाको लागि प्याक बनाउन चाहिने सामाग्रीहरु निम्न प्रकार छन – आधा चम्चा चिनी – दुई ठूलो चम्चा पानी – अण्डाको पहेंलो भाग – आधा चम्चा कागतीको रसलगाउने तरिका चिनी र पानी तताएर एक आपसमा मिसाउने र मिसिए पछी अण्डाको पहेंलो भाग फेट्ने त्यसमा कागती पानी राखेर फेरी फेट्ने र २० मिनेट सम्म अनुहारमा लगाउने र सफा पानीले मुख धुने त्यस पछी भिटामिन ‘ ई ‘ भएको क्रिम लगाउने
२) चिल्लो छालको लागि प्याक बनाउन चाहिने सामाग्री – पातलो कपडा – आलुको भित्री भाग – तातो पानी- कपासलगाउने तरिका :पहिले अनुहारमा बाफ लिने र कपासले सफा संग अनुहार पुछ्ने त्यसपछी आलुलाई पातलो कपडामा राखेर चायाँ भएको ठाउमा १० देखी १५ मिनेट सम्म सर्कल मसाज गर्ने